Toshiba waxay soo bandhigeysaa qaybteeda Mashruuca Ara | Androidsis
Toshiba waxay muujineysaa qaybteeda Mashruuca Ara
Alfonso ee Miraha | | Noticias
Wax yar ayaa ka haray Google si ay u bilawdo casriga casriga ah ee ugu horreeya. The Mashruuca Ara wuxuu ka socdaa xoog ilaa xoog oo maalin kasta soosaarayaasha cusubi waxay ku biiraan fikraddan iyagoo alaabooyinkooda ugu soo bandhigaya qaab qaab ah.
Waan ognahay in daabacaadda soo socota ee Shirweynaha Caalamiga ah ee Moobillada ee magaalada Barcelona aan ku arki doonno wararka qaar,Waxaan xitaa tijaabin karnaa nooc, laakiin inta aan sugeyno waan ku ciidi karnaa kuwan modules for Project Ara oo ay daabacday Toshiba.
Toshiba waxay soo bandhigeysaa qalabkeeda kaamirada Mashruuca Ara
Waana in soo saaraha saldhigiisu yahay Tokyo, uu muujiyey modulesyadiisa cusub ee mashruuca Ara ee oreitnados ee kaamirooyinka. Dhinac waxay ku soo bandhigeen muraayadaha hore ee 2 megapixel oo lagu daray laba qaybood oo loogu talagalay 5 iyo 13 megapixel kamaradaha gadaal siday u kala horreeyaan.
Hada modulesyadan cusub ee ka socda Toshiba waa uun noocyo In kasta oo qorshaha weyn ee Jabbaan uu yahay inay bilaabaan wax soo saar badan ayna u fidiyaan kuwa adeegsada aaladda casriga ah sanadka soo socda, qorshooyinka horumarineed ee saddexda sano ah ee ay soo bandhigtay Toshiba.
Waxa ugu xun ayaa ah in aanaan haysan wax sawirro muunad ah oo fikrad naga siin kara inaan aragno tayada qabashada qaababkan inkasta oo ugu yaraan aan arki karno a fiidiyow muujinaya hawlgalka moduleka 5 megapixel.
El Project Ara ayaa runtii xiiso leh. Markay Google iibisay Motorola waxay sifiican u ilaalisay fikraddan soo saaraha Mareykanka. Intaa waxaa dheer, soo-saareyaal badan ayaa ku soo biiraya mashruucan xiisaha leh. Ma aha in la xuso qaababka u janjeedha caafimaadka, kuwaas oo la hubo inay yihiin kuwa ugu fiican ee iibiya.
Waxaan rajeyneynaa in Google ay dhowaan soo saari doonto aaladdii ugu horreysay oo leh nidaamkan qaabdhismeedka xiisaha leh maxaa yeelay in si buuxda loo qaabeeyo astaamaha taleefankaaga aad ayey iila muuqataa aniga runtii. Sidoo kale Google u oggolow qaybo ka mid ah inay kululaadaan, looma baahna in la damiyo qalabka.
Adiga maxaad u malayn Mashruuca Ara? Ma u malaynaysaa inay dhab ahaan calaamadeyn doonto ka hor iyo ka dib qaybta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Toshiba waxay muujineysaa qaybteeda Mashruuca Ara